Translations < Burmese < Twenty Fifteen < GlotPress Translate WordPress.com
Translation of Twenty Fifteen: Burmese	Glossary
Filter ↓ • Sort ↓ • All (75) • Untranslated (12) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0) • Current Filter (63)
Our 2015 default theme is clean, blog-focused, and designed for clarity. Twenty Fifteen's simple, straightforward typography is readable onawide variety of screen sizes, and suitable for multiple languages. We designed it usingamobile-first approach, meaning your content takes center-stage, regardless of whether your visitors arrive by smartphone, tablet, laptop, or desktop computer.	 ၂၀၁၅ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူလ အခင်းအကျင်းမှာ သန့်ရှင်းပြီး၊ ဘလော့ဂ်ဦးစားပေး၊ ရှင်းလင်းသော ဒီဇီုင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ Twenty Fifteen ၏ ရိုးရှင်းသော တန်းတန်းမတ်မတ် စာရေးသားမှုပုံစံကြောင့် ဖန်သားပြင်အရွယ်စံုတွင် ကောင်းမွန်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်သလို ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်လည်း သင့်တော်ပါသည်။ သင့်ဆိုဒ်သို့ လာလည်ပတ်သူတို့မှ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ လက်ပ်တော့များ သို့မဟုတ် စားပွဲတင်ကွန်ပြူတာများ စသဖြင့် မည်သည့် စက်ကိရိယာဖြင့်မဆို ကြည့်ရှုစဉ်တွင် သင့်ရေးသားဖော်ပြမှု အကြောင်းအရာများသည် ဗဟိုတွင် တည်ရှိဖော်ပြစေရန် မိုဘိုင်းဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။	 Details
၂၀၁၅ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူလ အခင်းအကျင်းမှာ သန့်ရှင်းပြီး၊ ဘလော့ဂ်ဦးစားပေး၊ ရှင်းလင်းသော ဒီဇီုင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ Twenty Fifteen ၏ ရိုးရှင်းသော တန်းတန်းမတ်မတ် စာရေးသားမှုပုံစံကြောင့် ဖန်သားပြင်အရွယ်စံုတွင် ကောင်းမွန်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်သလို ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်လည်း သင့်တော်ပါသည်။ သင့်ဆိုဒ်သို့ လာလည်ပတ်သူတို့မှ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ လက်ပ်တော့များ သို့မဟုတ် စားပွဲတင်ကွန်ပြူတာများ စသဖြင့် မည်သည့် စက်ကိရိယာဖြင့်မဆို ကြည့်ရှုစဉ်တွင် သင့်ရေးသားဖော်ပြမှု အကြောင်းအရာများသည် ဗဟိုတွင် တည်ရှိဖော်ပြစေရန် မိုဘိုင်းဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
Full size	Used before full size attachment link. အရွယ်အစား အပြည့်	 Details
Categories	Used before category names. ကဏ္ဍများ	 Details
Tags	Used before tag names. စကားစုတွဲများ	 Details
, Used between list items, there isaspace after the comma. ၊ Details
Author	Used before post author name. စာရေးသူ	 Details
Posted on	Used before publish date. ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ ချိန် Details
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ ချိန်
Format	Used before post format. ပံုစံ	 Details